ကျွန်း - Castaway ၂ (အပြည့်)၊ ကန့်သတ်ထားသောအချိန်အတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည် ငါက Mac ပါ
ကျွန်း - Castaway ၂ (အပြည့်)၊ ကန့်သတ်ထားသောအချိန်အတွက်အခမဲ့
ကျွန်း (Castaway 2) (အပြည့်) များသောအားဖြင့်စျေးနှုန်းရှိပါတယ် 6,99 € အချိန်အကန့်အသတ်နှင့်သာပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည် လုံးဝအခမဲ့။aအပေါ်အစပြု အံ့သြဖွယ်စွန့်စားမှု ဒါကကျွန်းအနွယ်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မယ်။ သဲကန္တာရကျွန်းသို့ပြန်သွားပါ၊ မူလကော့ဝါးဝါးများမရောက်ရှိမီကျွန်း၏သမိုင်းကြောင်းကိုရှာဖွေရန်အချိန်မီပြန်သွားပါ။ ရှုပ်ထွေးသောနက်နဲသောအရာများကို decipher အမြိုး၏လူသစ်လူသားဖြစ်လာရန်။ ကြီးမားပြီးသာယာလှပသောကျွန်းကိုစူးစမ်းပါနှင့် ငါးမျှားတတ်ရန်၊ အတန်းအစားများကိုလိုက်ရှာရန်၊ တောဝက်များနှင့်ခုန်တတ်သောတိရိစ္ဆာန်များကိုပစ်ရန်၊ ချက်ပြုတ်ရန်၊... နှင့်ပင်စုန်းအတတ်လေ့ကျင့်! ဒီဂိမ်းဟာစပိန်လိုလုံးဝပဲ။
ဆေးရည် ဘေးအန္တရာယ်ရှိသောရွှံ့နွံတောများနှင့်ဘိုးဘေးများ၏တောအုပ်ကိုသင်စူးစမ်းလေ့လာစဉ်သင်၏ကာကွယ်မှုကိုလျစ်လျူမရှုပါနှင့်။ ရှားရှားပါးပါးကောက်ယူစုဆောင်းမှုများကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်ထူးဆန်းသောသိပ္ပံပညာရှင်ပါမောက္ခ Langst ကိုကူညီရန်သင့်မျက်လုံးများကိုစူးစိုက်ကြည့်ပါ။ ကျွန်းသူကျွန်းသားများ၊ အမြိုး၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ ကျွန်း၏အုပ်ထိန်းသူအသစ်ဖြစ်မည့်သူကိုရှာဖွေပါ။ တန်ချိန်များစွာရှိတဲ့စိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းခြင်းအားဖြင့်၊ မင်းတို့အနွယ်ကသူတို့ရွာကိုဘာကြောင့်စွန့်ခွာတာလဲ၊ ပြီးတော့နတ်ကွန်းဘယ်လိုမူလပုံစံလဲဆိုတာကိုသင်နောက်ဆုံးမှာတွေ့လိမ့်မယ်နက်နဲသောအရာတခုကိုမဘော်ပြမှီ၊
ပြီးစီးရန်စိတ်ဝင်စားဖို့မစ်ရှင် 300 ကျော်
ပါမောက္ခ Langst အတွက်စုဆောင်းရန် 28 ထူးဆန်း
တစ် ဦး ကစိတ်ဝင်စားဖွယ် storyline နှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဂရပ်ဖစ်
ဂိမ်းထဲမှာရရှိနိုင်: အင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ်, အီတလီ, ဂျာမန်, españolပေါ်တူဂီ၊ ဘရာဇီးပေါ်တူဂီ၊ ရုရှား၊ ကိုးရီးယား၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ပိုလန်၊
တင်ပါတယ်: 29 / 06 / 2014
အရွယ်: 506 ကို MB
ဘာသာစကား: စပိန်တရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ အီတလီ၊ ဂျပန်၊ ဒတ်ခ်ျ၊ ပိုလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ရုရှား၊ ဆွီဒင်၊
ဆော့ဖ်ဝဲရေး: G5 ဖျော်ဖြေရေး
compatibility: OS X 10.7.4 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်မှ
ဒီ link မှာသင်ပထမပိုင်းကိုဝယ်လို့ရပါပြီ ကျွန်း - ကတ်စ်ဝေး (အပြည့်).
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » ကျွန်း - Castaway ၂ (အပြည့်)၊ ကန့်သတ်ထားသောအချိန်အတွက်အခမဲ့
Microsoft က iPad Pro နှင့် MacBook Pro တို့အား၎င်း၏ Surface Pro4နှင့် Surface Book Laptop အသစ်တို့ဘက်တွင်ရပ်တည်သည်
Porsche သည် 911 model အသစ်အတွက် carplay ကိုရွေးချယ်သည်